Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Gumaysiga oo Shacabka Garbo Dhibaatooyin Badan Kuhaya.
Ciidanka Gumaysiga oo Shacabka Garbo Dhibaatooyin Badan Kuhaya.
Wararka naga soo gaadhaya Dagmada Garbo ee Gobolka Nogob ayaa sheegaya dhibaatooyin aad u badan ooy ciidamada gumaysigu ku hayaan dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga Dagmada.
Warkan oon kahellay xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) ayaa sheegaya inay todobaadkan ciidamada wayaanahu bilaabeen olole ay dadka ree miyiga ah ee Dagmada Garbo iyo nawaaxigeeda ku dhaqan si qasab ah uga soorarayaan goobihii ay daganaayeen iyagoo ku amraya inay dagaan magaalada Garbo.
Dadka shacabka ah ee xoolo dhaqatada ah ayaa kabiyo diiday in iyaga iyo hantidooda lagu soo oodo duleedka magaalada waxaana bilowday olole nin kasta iyo hantidiisa lagu soo oodayo magaalada bowd keeda ama gudaheeda.
falkan arxan darrada iyo axmuq nimada ah ayaa yimid xili diraac kulul ah oo xooluhu ubaahan yihiin deegaanada miyiga fog ah si ay u helaan biyo iyo baad kufilan.
Warka ayaa intaas ku daraya inay reeruhu dib u guurayaan markay ciidamadu ka tagaanba iyagoo isku dayaya inay dhuuntaan balse laga daba duulayo oo lagu soocelinayo goobtay kabaqdeen iyagoo waliba lakulmaya dhibaato aad u culus oo jidh-dil loogu gaysanayo iyadoo sabab looga dhigayo inay amarkii Gumaysiga jabiyeen.
Sikastaba ha ahaatee dhibaatada ku habsatay dadka ree miyiga ah ee Dagmada Garbo iyo nawaaxigeeda ku dhaqan ayaan ilaa hada wax xal ah loo helin iyadoo laqiyaasayo hadii ay xaaladu sidaas ku siisocoto inay dhici karto dhimasho dadka iyo duunyadaba kutimaada.